Mpanamboatra sy mpamatsy Peach Yellow China Heritage
Ny paiso mavo vaovao dia avy any an-tanàna Linyi miaraka amin'ny loko mamirapiratra sy ny tsiro tsy manam-paharoa.
Paiso mavo marikivy & mamy ary matsiro, hena mavo volamena sy malemy paiso, paiso volamena maina, fampiasana voina mavo avo lenta amin'ny alàlan'ny fandroana mangatsiaka amin'ny siropan'ny maripana ambany, miantoka ny asidra sy manitra manokana, ary tsiro tsy manam-paharoa, kalitao tsy misy.
Fonosina manodidina ny vovo-siramamy kely, matsiro sy tsy miraikitra, tian'ny mpanjifa anatiny sy vahiny. Ny fikarakaran-tranon'i Heritage - paiso mavo volamena maina, nofo feno sy henjana, marikivy sy mamy, ary tsiro Q bounce, lokony volamena manintona, rehydration tsiro feno tsara, dia ny vokatra tompon-daka voankazo ao an-toerana, ny fifantohan'ny OEM ho an'ny marika maro hafa.
Ny fikatsahana mandrakizay dia ny fiheverana ny "fiheverana ny tsena, ny fanajana ny fomba amam-panao, ny fiheverana ny siansa" miampy ny teôria ny "kalitao ny fototra, mino ny lehibe sy ny fitantanana ny mandroso" ho an'ny ambongadin'i Factory China Manondrana Voankazo Maina Peach Mamy Mamy Dried Style Peach, ny orinasanay dia efa nanangana mpiasa efa za-draharaha, mahay mamorona ary tompon'andraikitra hamorona mpiantsena miaraka amin'ny fitsipiky ny fandresena marobe.
Orinasa ambongadiny sinoa voankazo maina, paiso maina, Raha te-hanatratra ny fitakian'ny tsena izahay dia nibanjina bebe kokoa ny kalitaon'ny entantsika sy ny serivisinay. Ankehitriny isika dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana ho an'ny endrika manokana. Izahay dia mivoatra hatrany amin'ny fanahin'ny orinasanay "miaina ny kalitaon'ny orinasa, manome toky ny fiaraha-miasa ary mitazona ny teny filamatra ao an-tsainay: ny mpanjifa aloha.
Maharitra hafiriana ny paiso maina?
Ny valiny marina amin'io fanontaniana io dia miankina betsaka amin'ny fepetra fitahirizana - mitazona paiso maina amin'ny faritra mangatsiaka sy maina.
Mba hampitomboana ny androm-piainan'ny paiso maina aorian'ny fisokafany, apetraho ao anaty fitoeram-pifandraisana voahidy mafy na kitapo plastika mavesatra.
Mandra-pahoviana ny paiso maina amin'ny hafanan'ny efitrano?
Ny paiso maina voatahiry tsara dia haharitra 6 ka hatramin'ny 12 volana amin'ny mari-pana amin'ny efitrano normal.
Tokony hampangatsiahana ny paiso maina ve ianao?
Amin'ny tontolo mafana sy mando, ny paiso maina dia tokony hotehirizina ao anaty vata fampangatsiahana.
Maharitra hafiriana ny paiso maina ao anaty vata fampangatsiahana?
Ny paiso maina dia hitandrina tsara mandritra ny 6 ka hatramin'ny 12 volana ao anaty vata fampangatsiahana.
Azonao atao ve ny mangatsiaka paiso maina?
Eny, ataovy mangatsiaka ny paiso maina ao anaty kaontenera na ny kitapo ho an'ny vata fampangatsiahana.
Mandra-pahoviana ny paiso maina ao anaty vata fampangatsiahana?
Ny paiso maina voatahiry tsara dia mitazona kalitao tsara indrindra mandritra ny 12 ka hatramin'ny 18 volana, saingy hijanona ho azo antoka ankoatr'io fotoana io.
Ny fotoan'ny vata fampangatsiahana aseho dia ho an'ny kalitao faran'izay tsara ihany - ny paiso maina izay nitazona mangatsiaka tsy an-kijanona tamin'ny 0 ° F dia ho voaro mandritra ny fotoana tsy voafetra.
Teo aloha: kiwi
Paiso mavo tsy ampy rano
Paiso maina voajanahary
Paiso Maty Masoandro